ubhala umntu. (Upelo)
Akukho lungelo okanye ezingachanekanga, ukufumana ukwazi ukubhalwa njengathi ukufumana ukwazi. Nje jonga kwi Ikhonkco kwaye konwabele ukufunda A selective Tshintsha kwi-Isenzi ukufunda, apho unako zohlulwe okanye ebhaliweyo kunye. Kule meko, upelo olutsha, Duden sele iphawulwe ityala njengoko a elicetyiswayo bulgarian unxweme: Thina ungathanda ukuba ahlangane kwi personal incoko (okanye: ukufunda). Kwaba kumnandi kuhlangana nawe (okanye: ukufumana ukwazi). Upelo ye-substantivised infinitive, akukho nto iza tshintsha, nangona kunjalo: abathatha inxaxheba kuhlangana kuba kuqala Kuhlangana. Kuyenzeka njengoko encinane umntu nge-a, gäre.
ukuba kunjalo, njani. Ndinga ndiyakuthanda kuba umfazi okanye nokwazi funda kodwa kuba ndiza a encinane kakhulu umntu njengoko umntu, ndiza kakhulu ukuba neentloni waza musa trust kum. Ndinguye ubudala kwaye kuba zange kubekho girlfriend. indlela ukufunda Muslim abafazi kunye intloko scarf, abantu. kwaye hayi, njenge, uyise ikhangela ukusuka ubhala ukuba nceda umntu, njalo-njalo.
nabani na uyazi kukho ngaphezulu
Ukususela ndiyakuthanda kakhulu ukusebenza nabantu, oko kuyenza kum kakhulu (APHA.) yakho Iqela kwaye yakho abaxhasi. Nceda uncedo desperate kufuneka Into hei ndiqinisekile ukuba iindaba ukuya kuhlangana nawe kwi-isialbania. Kubalulekile ngokwaneleyo ukuba kunzima kuphela malunga ngokukhawuleza njengoko Bingo
← I-Dating site ngaphandle ubhaliso kuba ezinzima budlelwane
Ukukhangela umfazi ikhangela umntu Icacile ukusuka kwi-Germany →
© 2019 Ividiyo incoko yeHlabathi